About us - Yuhuan Jin Aofeng (JAF) imishini Co., Ltd.
Yuhuan Jin Aofeng (JAF) imishini Co., Ltd.
Yuhuan Jin Aofeng (JAF) machinery Co., Ltd. umkhiqizi, ogxile ekubhuleni i-extender (i-wedge brake extender), i-brake cylinder, i-Synchronizer, ne-rocker shaft. Imikhiqizo yethu ilungele amaloli asindayo, iMishini Yobunjiniyela, amabhasi, izimoto zezolimo. Sithumela ezimakethe zomhlaba, futhi siphinde sibe nodumo oluncane kwezinye izimakethe, ikakhulukazi eNingizimu-mpumalanga ye-Asia!
Sasungulwa ngo-2005, futhi emva kweminyaka engu-15 yentuthuko eqhubekayo kanye nezinto ezintsha, sesizuze uhlelo lokukhiqiza oluvuthiwe.
Besibambisene nemboni ye-OE iminyaka eminingi. Ngokuhlangenwe nakho kwe-OE standard, singenise imishini eminingi yobuchwepheshe obuthuthukile ukuze sikwazi ukuthuthuka okuqhubekayo kwamandla ethu esayensi.
Sidlule isitifiketi se-ISO / TS16949. Ngaphandle kwalolu hlelo, sizinikele ekwenzeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme nekhwalithi ephezulu.
Ngokuqondene nomnyango wethu wocwaningo nentuthuko, bahlose ukucwaninga okujwayelekile nokuhlolwa kwemikhiqizo emisha. Ngemuva kwakho konke, sithuthukise imikhiqizo engaphezu kuka-400.
1.Ubuqotho kanye ne-Innovation
2.Pursuit emisha Technological
Ikhwalithi ephezulu ne-Globalization
ISIQINISEKISO SETHU SEBHIZINISI
Ngezinzuzo zobuchwepheshe ezingenakuqhathaniswa nezidingo ezisezingeni eliphakeme, sikholelwa ukuthi imikhiqizo yethu izoncintisana kakhulu ezimakethe.
Ukusebenza okuningiliziwe okugcwele kwemininingwane engu-2.
Umuzwa 3.High umthwalo ukukhiqiza
4.Precisely ukuhlola ikhwalithi yemikhiqizo.
5.Hlola zonke izici zobuchwepheshe.
Inkampani yethu ithobela indlela esezingeni eliphakeme, yokuthuthuka nokuthuthuka kobuchwepheshe, futhi ihlose ukuthuthuka okuqhubekayo, imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezifika ngesikhathi.
Uma unesithakazelo kumkhiqizo wethu, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Amakhathalogi azokwamukelwa kakhulu ukuthi uzocelwa wena. Bheka phambili ekubeni nobudlelwano obusha bebhizinisi nawe ngokuzayo.